Faritra Atsinanana: Ady amin'ny Covid-19 - Tetik'asa FANDRIAKA
vendredi, 24 juillet 2020 16:45
Ny fandriaka dia fomba Betsimisaraka entina anaovana asa iombonana sy ifanomezan-tanana amin'ny olona maromaro, ohatra rehefa anao asa fijijam-bary, asa tany, asa fananganan-trano.
Io teny io no nofidin’ny CRCO Atsinanana niantsoana an’ilay tetik’asa nentina nanatevenana ny fanentanana teny ifotony momba ny ady amin'ny aretina Covid-19.
Naharitra telo volana ny tetik’asa (13 Aprily- 13 Jolay). Maro ny asa vita:
- Ireo « affiches » sy « flayers » marobe nozaraina sy napetaka manerana ny tanànan’ny Toamasina;
- Manodidina ny roanjato ireo mpanentana sy « agents communautaires » nahazo fanofanana ka niara-nisalahy tamin'ny asa fanentanana rehetra natao;
- Fandaharana maherin’ny dimampolo no novokarina ka nalefa tamin'ireo haino aman-jery taty Toamasina sy ny manodidina;
- Fitaovana maro toy ny « dictaphone » no novidiana ka nomena ireo tobim-pahasalamana mba hampiasaina amin'ny fanentanana;
- Andro maro misesy no nanatanterahana fanentanana « allô allô » na « dalala » manerana ny tanàna.
Anisan’ny tena nampahomby ny tetik’asa FANDRIAKA, ny fisian’ny vaomiera stratejika ivondronan’ireo teknisianina maro, izay mamolavola ireo asa ho tanterahina. Mpiasan’ny fahasalamana, mpitarika fikambanana ary mpanentana efa za-draharaha avokoa no nandrafitra ity vaomiera ity, ka voafaritra sy voadinika tsara ny asa natao.
Nampandraisina anjara mavitrika koa ny tompon’andraikitra teny anivon’ny fokontany, ireo tanora mpanentanana ary ny Sojabe Ray aman-dReny to-teny anatin’ny firaha-monina.
Marihina fa nandritra ireo vanim-potoana namaivay ara-tsosialy sy nandritra ny fidangan’ny isan’ny marary, dia nanampy betsaka ny CRCO Atsinanana tamin'ny ezaka fampitoniana sy famahana ny disadisa, ny asa notanterahin’ny tetik’asa FANDRIAKA.
Izany hoe nanampy tamin'ny fahatratrarana ireo tanjona nahazoam-bokatra tsara teo amin'ny lafin’ny fanoherana ny fihanaky ny tsimok’aretina Covid-19 ity tetik’asa ity, izay ny Governora RAFIDISON Richard Théodore no tompon-kevitra tamin'ny famolavolana azy, ary ny UNICEF kosa no nanohana ara-bola sy ara-pitaovana.